यो हो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियम, कति छ दर्शक क्षमता ? – Everest Dainik – News from Nepal
यो हो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट स्टेडियम, कति छ दर्शक क्षमता ?
काठमाडौंः भारतको अहमदाबाद भन्ने शहरमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो क्रिकेट स्टेडियम तयार भएको छ। जम्मा ६३ एकड मा विस्तारित यो स्टेडियममा एकलाख १० हजार जनाले एकै साथ क्रिकेट हेर्न सक्ने बताइएको छ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी दर्शक क्षमता भएको क्रिकेट मैदान अस्ट्रेलियाको ‘मेलबर्न क्रिकेट ग्राउण्ड ‘ हो। यसको दर्शक क्षमता एकलाख २४ जना बताइन्छ। त्यस्तै भारतको सबै भन्दा ठुलो मैदान भनेर चिनिने कोलकाताको इडेन गार्डन को दर्शक क्षमता ६६ हजार रहेको छ। यो विश्वकोदोस्रो ठुलो स्टेडियम मानिन्छ।
तीन वर्षमा पूरा हुँदै काम
हाल तयार भएको स्टेडियमको नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम रहेको छ। यो अहमदाबादको मोटेरा भन्ने स्थानमा रहेकाले यसलाई मोटेरा स्टेडियम पनि भन्ने गरिएको छ।
यस स्टेडियमको निर्माण कार्य तीन वर्षमै पुरा हुँदै छ। यस मैदानको भूमि पूजन जन्युअरी २०१६ मा सम्पन्न भएको थियो। हाल यसको अधिकांश काम सम्पन्न भैसकेको र डिसेम्बर २०१९ सम्म यो मैदान पूर्ण रूपमा तयार हुने भारतीय संचार मध्यमहरूमा रहेको छ। यस मैदानमा २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेलाइने र यो विश्वकै सर्वाधिक दर्शकहरूलाई बसाल्न सक्ने स्टेडियमको रूपमा रहने बताइन्छ।
कति भयाे खर्च ?
यस स्टेडियमको कुल लागत सात अर्ब भारतीय रुपियाँ रहेको बताइन्छ। यसको निर्माण गुजरात क्रिकेट संघ ले गर्न लागेको बताइएको छ।
यस मैदानको निर्माण पक्षले यसलाई पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम बनाउने बताएको छ। यसमा मुख्य मैदानका अतिरिक्त तीन अभ्यास मैदान, क्लब हाउस, ओलम्पिक साइज स्विमिङ पुल र एउटा इन्डोर क्रिकेट एकेडेमी समेत रहने बताएको छ।
यसका अतिरिक्त स्टेडियमलाई कुनै खेलाडीले चौका या छक्का प्रहार गर्दा त्यहाँ उपस्थित प्रत्येक दर्शकले त्यसलाई सजिलै हेर्न सक्ने किसिमले डिजाइन गरिएको छ। साथै स्टेडियममा चार हजार कार र १० हजार दुइ पाङ्ग्रे सवारी पार्किङको सुविधा रहेको छ।
यस स्टेडियममा रातिको खेलका लागि एलइडी लाइट प्रयोग गरिनेछ। कुनै खेल मैदानमा एलइडी प्रयोग गरिएको यो पहिलो पटक हुनेछ।
त्यसका अतिरिक्त स्टेडियममा ७५ ‘कर्पोरेट बक्स’ बनाइनेछन् . मैदानभित्र प्रवेश र निकासका लागि अलग अलग व्यवस्था गर्न लागिएको छ। साथै स्टेडियमसम्म मेट्रो लाइन समेत विस्तार गरिने भएको छ।
भारतका लागि निकै फिलफाप
तर यो स्टेडियम नयाँ भने होइन। यहाँ नेर पहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम थियो। त्यस बेला यस मैदानको दर्शक क्षमता ५४ हजार थियो। त्यसमा थुप्रै टेस्ट र एकदिवसीय खेलहरू खेलिएका छन्।
यस स्टेडियमलाइ यस अघि पनि सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम नै थियो र यसमा विभिन्न खेलाडीहरूले थुप्रै विश्व कीर्तिमान बनाइसकेका छन्। विशेषगरि भारतका लागि त याे स्टेडियम निकै फिलफाप रह्याे ।
यसै स्टेडियममा १९८२ मा भारतीय ब्याट्सम्यान सुनिल गावस्करले टेस्ट क्रिकेटमा १० हजार रन पूरा गरेका थिए। त्यस्तै भारतका पूर्व कप्तान कपिल देवले न्युजिल्याण्डका रिचर्ड हेडलीको रेकर्ड तोड्दै सबैभन्दा बढी टेस्ट विकेट लिने रेकर्ड बनाएका थिए।
यसै स्टेडियममा सचिन तेन्दुलकर ले पहिलो दोहोरो टेस्ट शतक प्रहर गरेका थिए। र, २०११ को विश्वकपमा भारतले यसै मैदानमा विश्व विजेता अस्ट्रेलियालाई हराएर आफ्नो विश्वकप विजयको अभियान सुनिश्चित गरेको थियो।
ट्याग्स: क्रिकेट, विश्वकै सबैभन्दा ठुलो क्रिकेट स्टेडियम